आफ्नो निजी जीवनमा उनीहरुको प्रवेश धातक बन्न पुग्छ । उनीहरुलाई यति धेरै विश्वास गरिन्छ कि पछि आफु नै पछुताउने समय आउने गर्छ । केही यस्तै खेलाडीहरु रहेका छन् जसले आफ्नै मिल्ने साथीको श्रीमती उठाइदिए ।
१. मुरली विजय र दिनेश कात्र्तिक
मुरली विजय र दिनेश कात्र्तिक मिल्ने साथी थिए । तर मुरली विजयले आफ्नै मिल्ने साथीलाई यसरी धोका दिए कि दिनेश कार्तिक धेरै वर्षसम्म सम्हालिन सकेनन् । एक समय यस्तो पनि थियो जब उनीहरुको मित्रताको ठुलै खबर बन्ने गथ्र्यो । दिनेशकी श्रीमतीसँग मुरलीको अफयेरले सबै सम्बन्ध लथालिंग बन्यो । अन्तत दिनेशकी श्रीमती निकिता मुरलीकी श्रीमती बन्न पुगिन् ।
३. पावेल व्युरो र सर्जेई फेडेरो
पावेलको अफेयर टेनिस खेलाडी अन्ना कुर्निकोवासँग चलिरहेको थियो । लामो समयसम्म उनीहरु एकअर्कालाई डेट गरिरहेका थिए । तर, सर्जेडको आगमनले सबै भताभुंग भएको थियो । पावेललाई जब झट्का लाग्यो जब अन्नाले पावेलको नजिकको साथी सर्जेडसँग विवाह गरिन् ।
यहाँ त कहानी नै बडा गजबको बनेको थियो । जेम्स र डेलौटको सम्बन्ध तब तोडियो जब जेम्सकी आमा डेलौटसँग अफयेर चलेको कुरा बाहिर आयो ।